Akụkọ Bible: Osisi nke Na-ere Ọkụ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
MOZIS chọọrọ ebe atụrụ ya ga-ata nri rute n’ugwu Horeb. N’ebe ahụ, ọ hụrụ osisi nke na-ere ọkụ, ma ọkụ ahụ adịghị erepịa osisi ahụ!
Mozis nọ na-eche, sị: ‘Nke a bụ ihe ịtụnanya. Ka m ruo nso ma lerukwuo ya anya.’ Mgbe o mere otú ahụ, ọ nụrụ olu nke si n’osisi ahụ, na-asị: ‘Abịarula nso. Yipụ akpụkpọ ụkwụ gị, n’ihi na ebe i guzo bụ ala dị nsọ.’ Ọ bụ Chineke na-ekwu okwu ahụ site n’ọnụ otu mmụọ ozi, n’ihi ya, Mozis kpuchiri ihu ya.
Mgbe ahụ, Chineke sịrị ya: ‘Ahụwo m ahụhụ ndị m na-ata n’Ijipt. M ga-anapụta ha, ọ bụkwa gị ka M ga-eziga idupụta ndị m n’Ijipt.’ Jehova gaje iduba ndị ya n’ala Kenan ahụ mara mma.
Ma Mozis sịrị ya: ‘Ọ dịghị onye m bụ. Olee otú m pụrụ isi mee nke a? M jeekwanụ, ụmụ Izrel jụọ m, sị, “Ònye zitere gị?” Mgbe ahụ, gịnị ka m ga-ekwu?’
Chineke sịrị ya: ‘Nke a bụ ihe ị ga-asị ha: “JEHOVA Chineke nke Ebreham, Chineke nke Aịzik, na Chineke nke Jekọb ezitewo m n’ebe unu nọ.”’ Jehova gbakwụnyekwara, sị: ‘Nke a bụ aha m ruo mgbe ebighị ebi.’
Mozis wee sị: ‘Gịnịkwanụ ma ọ bụrụ na ha ekwetaghị ma m gwa ha na ọ bụ gị zitere m?’
Chineke ajụọ ya: ‘Gịnị ka i ji n’aka?’
Mozis wee sị: ‘Mkpanaka.’
Chineke sịrị ya: ‘Tụpụ ya n’ala.’ Mgbe Mozis tụpụrụ ya, osisi ahụ ghọrọ agwọ. Mgbe ahụ, Jehova gosiri Mozis ọrụ ebube ọzọ. Ọ sịrị ya: ‘Tinye aka gị n’ime uwe gị.’ Mozis tinyere aka ya, ma mgbe o wepụtara aka ya, aka ya na-enwu ọcha dị ka snow! Aka ya yiri ihe nwere ọrịa ọjọọ a na-akpọ ekpenta. Ọzọ, Jehova nyere Mozis ike ịrụ ọrụ ebube nke atọ. N’ikpeazụ, ọ sịrị: ‘Ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ ebube ndị a, ụmụ Izrel ga-ekwere na ọ bụ M zitere gị.’
Mgbe nke a gasịrị, Mozis lakwuuru Jetro wee sị ya: ‘Biko ka m laghachikwuru ndị m n’Ijipt iji hụ otú ha na-eme.’ Ya mere, Jetro sịrị Mozis gaa nke ọma, Mozis wee malite ịlaghachi Ijipt.
Ọpụpụ 3:1-22; 4:1-20
Olee aha ugwu e sere na foto a?
Kọwaa ihe dị ịtụnanya nke Mozis hụrụ mgbe ọ chị atụrụ ya gbagoo n’ugwu ahụ?
Gịnị ka otu olu nke sitere n’ebe osisi ahụ nke na-ere ọkụ dị kwuru, ònyekwa nwe olu ahụ?
Gịnị ka Mozis zara mgbe Chineke gwara ya na ọ ga-edupụta ndị Chineke n’Ijipt?
Gịnị ka Chineke gwara Mozis ka o kwuo ma ọ bụrụ na ndị Izrel ajụọ ya onye zitere ya?
Olee otú Mozis ga-esi nwee ike igosi na ọ bụ Chineke zitere ya?
Gụọ Ọpụpụ 3:1-22.
Olee otú ahụmahụ Mozis si emesi anyị obi ike na ọ bụrụgodị na anyị echee na anyị erughị eru ịrụ ọrụ e nyere anyị n’ọgbakọ, Jehova ga-akwado anyị? (Ọpụ. 3:11, 13; 2 Kọr. 3:5, 6)
Gụọ Ọpụpụ 4:1-20.
Olee otú àgwà Mozis si gbanwee n’ime afọ iri anọ ahụ ọ nọrọ na Midian, gịnịkwa ka ndị na-agbalị iru eru inweta ihe ùgwù n’ọgbakọ pụrụ ịmụta site na nke a? (Ọpụ. 2:11, 12; 4:10, 13; Maị. 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)
Ọ bụrụgodị na Jehova enye anyị ntaramahụhụ site ná nzukọ ya, olee obi ike ihe nlereanya Mozis pụrụ ime ka anyị nwee? (Ọpụ. 4:12-14; Ọma 103:14; Hib. 12:4-11)